Ukuphonononga i-Insta360 Pro: kuvavanywe ikhamera ye-360-degree erekhoda kwi-8K | Iindaba zeGajethi
UNacho Cuesta | | Ukufota, Ikhamera
Imakethi yekhamera yeedigri ezingama-360 ihamba kancinci ithandwa phakathi kwabasebenzisi, nangona kunjalo, kwicandelo lobungcali ukhetho lukhawulelwe ngakumbi kwaye iimodeli onokukhetha kuzo zincinci. Ikhamera ye-Insta360 Pro yenye yeereferensi Kwimarike yangoku, kukhazimla ngeelensi zayo zoxolo zamehlo ezi-6 ezinakho ukurekhoda iifoto kwisisombululo se-8K.
Ukuba ufuna iinkcukacha ezithe vetshe ngale khamera yeVR, siza kukuxelela zonke izinto zayo ezingezantsi:
2 Iimpawu ze-Insta360 Pro
3 Iimpawu zokuqala
4 Umgangatho womfanekiso we-Insta360
I-unboxing ye-Insta360 Pro iyamangalisa. Ibhokisi yekhadibhodi itshintshwe nge Ityala leplastikhi elinganyangekiyo elinamakhonkco amabini okhuseleko ukuthintela ukuvuleka ngengozi okunokubeka emngciphekweni ukuthembeka kwezixhobo (ezixabisa phantse i-euro ezingama-4.000, Apha ungayithenga).
Ngoku ukuba uyazi ukuba iindleko zeekhamera ezingama-360, ayizukumangaliswa kwaphela kukuba ikhuselwe kangaka. Kubalulekile kwimveliso eza kuhlala ihamba rhoqo.
Nje ukuba ivulwe ibrifkheyisi siyayibulela loo nto ukhuseleko lwangaphandle lukwadluliselwa ngaphakathi ngothotho olukhulu lwegwebu elikumgangatho ophezulu. Ityala leplastikhi lifumana ukubethwa kwaye igwebu liya kuthatha amandla kunye nokunyikima ukuze i-Insta360 Pro ingabinanto kwaphela.
Ngaphandle koku kungasentla, kwibrifkheyisi Sifumana ezi zinto zilandelayo:
Ishaja ye-12V kunye ne-5A
Iteyiphu yerabha ukukhusela iilensi kumaqhuma nothuli
Ibhetri ye-5100 mAh ukubonelela malunga nemizuzu engama-70 yokuzimela
I-USB kwiadaptha ye-Ethernet
Ilaphu le Microfiber
ICintra yokuthwala ikhamera egxalabeni ngokufanelekileyo
Amaxwebhu kunye neleta yombulelo evela kwinkampani
Nangona zininzi izinto ezifakiwe, Ukuze ukwazi ukuqala ukusebenzisa ikhamera, uyakufuna i-SD Extreme Pro V30, V60 okanye imemori khadi yeV90 ukuxhasa amaxabiso okudlulisa afunekayo ukurekhoda ividiyo eyi-8K. Sikwanokukhetha ukudibanisa i-SSD hard drive usebenzisa uqhagamshelo lwe-USB 3.0. Njengoko ubona, asinakho ukusebenzisa nayiphi na imemori kuba iimfuno ziphezulu.
Iimpawu ze-Insta360 Pro
Ukuze uyazi okungakumbi malunga ne-Insta360 Pro, ngezantsi unayo Isishwankathelo seempawu zayo eziphambili:
Iilensi ezi-6 zokuloba
I-7680 x 3840 (2D 360)
I-7680 x 7680 (3D 360)
Iifomathi ze-DNG Raw okanye zeJPG
I-7680 x 3840 kwi-30fps (2D 360)
I-3840 x 1920 kwi-120fps (2D 360)
6400 x 6400 okanye 30fps (3D 360)
3840 x 3840 okanye 60fps (3D 360)
Isigqibo sokusasaza ngqo
I-3840 x 1920 kwi-30fps (2D 360)
I-3840 x 3840 kwi-24fps (3D 360)
Iyahambelana neYouTube, Facebook, Periscope, Twitter, Weibo
Inkxaso yeaudiyo yendawo
Ukususela kwi-1/8000 ukuya kwi-60 secs
Ukuzinziswa kwe-gyroscope ye-6-axis
1 / 4-20 intambo
I-SSD hard drive ngaphezulu kwe-USB 3.0
HDMI 2.0 Uhlobo-D
iOS, Android, Windows, kunye neMac
5100 mAh ibhetri
Ukuzimela kwemizuzu engama-75
Ikhamera inokusetyenziswa ngelixa ubiza
Ukomelela kwe-Insta360 Pro kusinika isikhombisi esihle sokuba Sijongene neqela elibizayo, Izikrokro eziqinisekisiweyo okokuqala xa sivula izixhobo kwaye ifeni iqala ukujikeleza ukukhuthaza ukupholisa, into egcinwe kwi-aluminium casing.
Iyonke Iilensi ezintandathu ezinkulu zokuloba zisijonga ecaleni ngokusisigxina. Banomngxuma we-f / 2.4 ngoko ke baqaqambile ngokwaneleyo ukuba bafumane iziphumo ezilungileyo nakwindawo ezikhanyisiweyo. Ukuba nangaliphi na ixesha ikhamera isengxakini, sine-ISO ehlengahlengiswa ngokuzenzekelayo kodwa esinokuhlengahlengisa ngesandla ngamaxabiso aqala kwi-100 ukuya kuma-6400, nangona kumaxabiso aphezulu umbono wengxolo emfanekisweni okuphawulekayo kunye nobukhali kulahlekile.
Ikhamera isebenza ngokuzimeleyo. Sifuna kuphela ukuba nekhadi lememori le-Pro V30 ye-SD egqithisileyo (ukuba yi-V90, ngcono) okanye i-USB 3.0 SSD hard disk kwaye ibhetri ihlawulisiwe. Ngaloo nto sinemizuzu engama-75 yokuzimela ukurekhoda ividiyo okanye ukufota iifoto kwizigqibo ezifikelela kwi-8K.
Umsebenzi osisiseko wekhamera unokwenziwa kwiscreen esincinci kunye namaqhosha angaphambili. Ilula kakhulu kwaye inomdla ukuphatha kuba sinamaqhosha okuhamba kwiimenyu kuphela, iqhosha lokwamkela kwaye elinye libuyele umva. Ewe ukujika kuthatha ixesha (malunga nemizuzwana engama-90) ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo ngaphambi kokuba uthathe ifoto okanye ividiyo.
Ngo kukhetha Singathatha ithuba lokudityaniswa okubanzi esikunikwa yi-Insta360 Pro ukudibanisa izixhobo zangaphandle ezinje ngemakrofoni (njengesiqhelo sineemakrofoni ezi-4 ezihambelana nokubanjwa kwesandi somhlaba, nangona ukusebenza kwazo kufanelekile) okanye isibonisi seHDMI ukujonga umfanekiso ofakwe yikhamera.
Sinokuphinda sisebenzise unxibelelwano lwe-RJ45 ukonwabela umgama ophezulu kakhulu ngokusebenzisa intambo ye-Ethernet, nangona sithanda ukhetho olungenazingcingo ngakumbi, i-Insta360 Pro Iza ifakwe i-WiFi ukuze sikwazi ukudibanisa ilaptop okanye i-smartphone kwaye ube nakho ukuyisebenzisa njenge-viewfinder, i-shutter ekude, wenze uhlengahlengiso lwemifanekiso, ngqo kwiinethiwekhi zentlalo, njl.
Njengoko ubona, kukho uluhlu olubanzi lweenketho ezikhoyo xa kuziwa kunxibelelwano.
Umgangatho womfanekiso we-Insta360
Umgangatho womfanekiso ngowona mandla uphambili wezixhobo. Ayisiyiyo kwaphela eyokuzonwabisa ngezigqibo ze-8K kodwa ubukhali bomfanekiso ungaphezulu kwesiqhelo, into ebaluleke ngakumbi kwabo bafuna ukufaka imifanekiso kwi-3D okanye inyani yokwenyani, into eyonyukayo enkosi kwiiglasi ezinjenge-Oculus kwaye Umhlaba wentengiso okanye wokuzonwabisa ufuna ukuxhaphaza ukunika amava amatsha kubasebenzisi.
Unyango kunye nomanyano wayo yonke imifanekiso efakwe yilensi nganye iyasebenza kwaye inika ividiyo isiphumo sokwenyani kumbukeli.
Ukuba sisebenzisa ikhamera ubukhali buphuculwe kakhulu ekuthatheni imifanekiso malunga nevidiyo. Apha ngezantsi ungabona umzekelo we-snapshot ethathwe nge-Insta360 Pro eboniswe iflethi, kwaza kwasetyenziswa ifoto efanayo ne-"planet encinci".
Ifoto eflethi (bona ubungakanani boqobo)
Kunzima ngokwenene ukuchaza ngamagama icandelo elinikezela ngamathuba amaninzi, kokubumba kunye nobugcisa. Into ecacileyo yile izixhobo ezihamba kunye ne-Insta360 Pro sinokufumana iziphumo ezintle ngaphandle kokuba kusetyenziselwa ubungcali. Ukufota kunye nevidiyo enomdla nayo inokusebenzisa le khamera ingama-360, nangona kufanele icace gca malunga neendleko zokuthenga izixhobo zalolu hlobo (into esele siyicingele kwiikhamera ze-SLR ezinjengeCanon 5D Mark).
Kwaye sisoftware enetyala le-Insta360 Pro ejolise kubo bonke abaphulaphuli. Sineenkqubo zokuhlela zobuchule esaziyo sonke kodwa umenzi usinika iintlobo ngeentlobo zezicelo zeplatform Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, nokuba loluphi ulwazi esinalo:
Inkqubo yolawulo lwekhamera: njengoko igama layo libonisa, sisixhobo esikwaziyo ukusebenzisa i-Insta360 Pro kwiselfowuni, ithebhulethi okanye ikhompyuter yethu.
I-Insta360 Pro Stitcher: Sisoftware esinceda ekupheliseni iimpazamo ezinokubakho kwimanyano yemifanekiso efakwe yikhamera, into exhaphake kwiimodeli zenkampani. Uhlaziyo lwamva nje lwefirmware i-Insta 360 Pro efumeneyo iluphucule kakhulu lo mba.
Umdlali we-Insta360Umdlali wemifanekiso neevidiyo. Sirhuqa ngokulula ifayile eveliswe yikhamera kwaye sinokuyonwabela ngokuzenzekelayo kwifomathi yesidanga se-360.
Isitudiyo se-Insta360: ukuba sifuna ukuthumela ngaphandle okanye ukuhlela ukukhanya kwiifoto okanye kwiividiyo, le nkqubo iya kukuvumela ukuba wenze njalo.
Ezi zezonaapps ziphambili asinika zona umenzi kodwa njengoko ndisitsho, Singasebenzisa nayiphi na enye isoftware yokuhlela umfanekiso kunye nevidiyo.
Inkqubo ye-Insta360 Liqela elipheleleyo kwaye lijolise kwicandelo elithile yabemi. Ukunyuka kwenyani ebengezelelweyo kunye neyenyani kubangela ukuba amacandelo anje ngokuthengisa azihlaziye ngokunika abasebenzisi iindlela ezintsha zokunxibelelana neemveliso kwaye kulapho le khamera inokudlala indima eyahlukileyo kwishishini lendawo.
Yakha umgangatho kwaye ugqibe
Ubungcali kunye nokuyila okunokwenzeka
Ukuzimela okuphantsi. Kungcono ukuba ube neebhetri ezininzi okanye usebenze ngekhamera exhunywe kwinethiwekhi.
Ukuba awungobuchwephesha kwaye ngokulula njengehlabathi lokufota kunye nevidiyo, i-Insta360 Pro liqabane elifanelekileyo lokuhamba. Siza kuhlala sinememori ebhalwe kwividiyo enesidanga se-360 okanye ifoto kwikhompyuter yethu nangaphezulu komgangatho olungileyo, nangona kukude kwiziphumo esizifumana ngayo nayiphi na ikhamera ye-SLR okanye ye-APS-C. Kule meko, kufuneka sithathe isigqibo sokuba sikhetha umxholo wokunxibelelana kunokwesiqhelo, nangona sinokugcina okona kulungileyo kuwo omabini amazwe.
Yibethe? I-3.950 euro ekufuneka uyihlawule ukuze uyifumane.
Uphengululo lwe: UNacho Cuesta
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Ikhamera » Hlaziya i-Insta360 Pro